Kutamba Super Mario Run | IPhone nhau
Kutamba sei Super Mario Run
Mushure memwedzi inopfuura mitatu yekumirira kubvira zvaziviswa kutanga kwaGunyana, Super Mario Run inozopedzisira yawanikwa paApp Store yevese iPhone ne iPad. Ndiyo yekutanga Nintendo mutambo wefoni nharembozha iyo iyo kambani yanga ichida kudzoreredza iko kwekutanga kupusa, uye mukomana ivo vakabudirira!
Pasina vavariro dzakasarudzika, Super Mario Run haigone kuve nyore. Ndiwo rutivi rwekupururudza mutambo umo Mario anomhanya achienderera kurudyi uye isu tinongoda ruoko rumwe (chaizvo, munwe mumwe) kutamba. Asi kunyangwe iri nyore, iwe unofanirwa kudzidzisa uye kuisa yako hunyanzvi hwekuita mukutamba. Tevere tinokuudza iwe nzira yekutamba Super Mario Mhanya uye uwane zvakanyanya mairi pa € 9,99 iyo inodhura mune yayo yakazara vhezheni.
1 Dzvanya Super Mario Mhanya
1.1 Mitatu mitambo yemitambo
1.3 Chii chinonzi World Tour mode?
1.4 Kutamba sei Super Mario Run
Dzvanya Super Mario Mhanya
En Super Mario RunPrincess Peach akukoka iwe kunhare kumutambo; arikubika keke asi akaipa Bowser atapa keke, atova mambokadzi, ikozvino yakavharirwa muBowser's castle, kubva kwaunofanira kumununura.
Mitatu mitambo yemitambo
Super Mario Run ine mitambo mitatu yemitambo iyo, muchidimbu, inoshanda seinotevera:.
En World Tour, iwe uchafamba kubva padanho kuenda padanho, uchirova mabhosi uye pakupedzisira uchirova Bowser kusunungura Princess Peach.
En Toad Rally, iwe uchakwikwidzana nevamwe vatambi pamhepo kuti uwane rukudzo rwezvigunwe, zvakakosha kuti uzadzise chinangwa chako, uye kujoina humambo hwako.
En Kingdom Builder, iwe unoshandisa iwo matoyi "kuvaka" humambo hwako.
Kana uchivhura mutambo kekutanga, iwe unozobvunzwa kusarudza dunhu rako uye ku kusaina kana kusaina neNintendo account. Hazvisi zvekumanikidza, asi iwe unofanirwa kuzviita nekuti neizvi unogona nyore kusevha zvibodzwa zvako, tamba yakasarudzika mini-mitambo uye zvakare uzviite mune yakawanda nzira. Iwe unogona kunyoresa neako Google, Twitter kana Facebook maakaunzi. Kana iyo account yagadzirwa chete, unofanira kubvuma mazwi acho.
Ipapo a yekudyidzana dzidziso kwauchazotsanangurirwa zvakadzama maitiro ekutamba Super Mario Run.
Chii chinonzi World Tour mode?
Mune iyo World Tour modhi yeSuper Mario Mhanya, semutambo wekare, unofanirwa Enda kumagumo enhanho kuti usvetuke pamusoro pemuti wedanda nguva isati yaperauye. Apa ndipo apo Mario anomhanya asingamiri achiunganidza mari, uye iyi ndiyo nzira yauri kuzoshandisa yakawanda yenguva yako, uchinyatsoedza kuyedza kuita zvirinani uye kuwana mari.
Rwendo Rwenyika runosanganisira 24 nhanho kuburikidza nhanhatu dzakasiyana nyika. Zvese zvekare zvinhu zvepasirese zveSuper Mario (mari, masimba-kumusoro, vavengi, nezvimwewo) zviri pano.
Paunotora download mutambo, iwe unogumira kune mashoma mashoma mazinga muWorld Tour modhi. Kuti uzarure mutambo uzere unofanirwa kubhadhara € 9,99 sekutenga mu-app.
Semunhu anomhanya padivi Mario anomhanya otomatikiIyo inotosvetuka pamusoro pezvipingamupinyi zvidiki uye vavengi pachayo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kusvetuka, kusvetuka uye kusvetuka. Kuti uite izvi, ingobata skrini; bata chigunwe chako kuti Mario asvetuke zvakatokwira. Uye ndiwo mutambo zvakanyanya.
Ehezve, kusvetuka kunofanirwa kuitwa panguva kwayo chaiyo. Izvo zvichaita zvirinani nguva dzese asi nekuti kune zvakawanda zvinhu zvinobatanidzwa, nekuti Mario haamire kumhanya uye iwe haugone kudzora kumhanya kwake, mutambo unogona kuve wakaomesesa. Unofanira kuita akasvetuka makuru uye kusvika mari, kusvetukira pamusoro vavengi kuti zvombo navo ... Kuti akwire uye kumusoro munyika Super Mario, unofanira kusvetuka pakati pamadziro.
Paunorasikirwa nehupenyu, Mario anodzokera mukati meye bubble. Tinya iro bubble uye tangazve mutambo.
Pakupera kwematanho ese matatu, iwe unofanirwa kurwisa mukuru webasa kuti aone kushaya simba kwake, kana chinhu chakatenderedza chaunogona kumushandisa. Izvi zvakasiyana kune wese maboss.
Super Mario Run inoenderana nekureruka, asi hausi mutambo uri nyore, zvakapesana, uye muropa kwazvo. Ehezve, kune zvimwe zvakawanda zvakavanzika zvakavigwa zvese muWorld Tour uye mune mamwe mamodheru, Toad Rally uye Kingdom Builder. Asi ini handina kumbofambira mberi zvakanyanya, uye haisi nyaya yekuvava kushamisika kune vateveri. Saka rega kuverenga ini uye dombo Super Mario Mhanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Kutamba sei Super Mario Run
Kari Soto akadaro
Ndichingovhura iyo app, inovhara ... ini ndatoedza kuyedza iyo iPhone uye kudzoreredza mutambo asi hapana chinondishandira 🙁
Pindura Kari Soto
Kana iwe uine jailbreak ndosaka, iwe unofanirwa kuisa tweak yekudarika iyo dziviriro.
Sekutaura kwaRen, kana uine Jailbreak, Super Mario Run haisi kuzokushandira. Tarisa mune ino iPhone News posvo: https://www.actualidadiphone.com/como-jugar-a-super-mario-run-con-jailbreak/
'Mario anomhanya otomatiki' Ini handingavimbe nevashanduri vepamhepo kunyora nyaya.
Imwe yakagadzirira. Pamwe hauna kutamba kana iwe unoshoropodza nekushoropodza. Ratidza webhusaiti kwatinoshandura chinyorwa maererano newe.
Chokwadi, "Mario anomhanya otomatiki", ndiko kuti, paunotanga kutamba, Mario anomhanya uye anomhanya uye anomhanya uye anomhanya, haugone kuimisa, unongobata kuti usvetuke. Zvinoita sekunge hauna kuvhura mutambo huh?
Iwe murume, nekuziva kuti kuChirungu 'kumhanya' zvinoreva zvese 'kumhanya' uye kuita chirongwa, uye nekuona nhoroondo yewebhusaiti pawakambove nekukanganisa kwekushandura dzimwe nguva, handingashamiswe zvachose.
Kudana maToad 'Toads' zvakare nekuti ini handina kana kuvhura mutambo, handiti? Kune imwe imbwa ine iro bhonzo, kwandiri iwe unogona kuita chero chaunoda, zvaingova kurudziro… .ndimi munozviratidza.
"Toad" izwi reChirungu rinoreva "shonga" (pane maduramazwi eizvi). "Toad" harisi zita chairo uye nekudaro rinogona kushandurwa zvakasununguka muchiSpanish. Uye kunyangwe dai zvaive, zvinogona kuturikirwa, saSharon Stone (Sara Piedra) kana Kevin Bacon (Kevin Bacon). Kungofanana nekuturikira iwe "mhanya", iwe unogona zvakare kududzira "chigunwe", handiti? Kunyangwe dai pakanga pasina Super Mario Run, "Toad" yaizoramba ichishandurwa se "chura", inyaya yemutauro, kwete mitambo. Asi zvakadaro!
Kuti haufanire kunditsanangudza, shamwari… .kuti iwe unogona kuita chero chaunoda. Uye nenzira, kana iwe ukawana mutambo kubva kuSa Super Mario saga muSpanish iyo yakashandura izwi rekuti Toad (iro nenzira, ndiro ZITA remunhu, kunyangwe iye 'nhangemutange' yake inonziwo iyoyo), ndiudze.
Huya, mhoro uye unakirwe nekutamba Super Mario Mhanya / Race / Mhanya kana chero chaunoda kududzira 😉
Nyowani Apple Campus 2 vhidhiyo. Kubva Chikunguru 2016 kusvika nhasi tichiona drone